Sakafo 5 hanatsarana ny fifindran'ny tsinay | Bezzia
Toñy Torres | 13/09/2021 16:00 | sakafo
Ny fananana fitetezana tsinay tsara dia ilaina mba hahasalama anao. Satria ilaina ny fanafoanana ny fako amin'ny vatana mba hiasa tsara ao amintsika ny zava-drehetra. Ary ny fitohanana dia mety miteraka fikorontanana isan-karazany toy ny fivontosan'ny lalan-drà, fantatra amin'ny hoe hemorrhoids na fisitahana anal, sns. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fanomezana lanja voajanahary amin'ny fako amin'ny alàlan'ny diky.
Mba hanatsarana ny fifindran'ny tsinay dia ilaina ny manaraka sakafo isan-karazany, voalanjalanja ary mahasalama. Ny fibre no otrikaina manampy betsaka indrindra, saingy tsy izy irery ihany, satria ny hafa toy ny sakafo masirasira, hydration na tavy no mankasitraka ny fitaterana. Raha te hahita ny fomba hanatsarana ny fifindran'ny tsinay ianao mifindra isan'andro ary manatsara ny fahasalamanao, dia tsy maintsy ampidirinao ao anaty sakafo ireto sakafo ireto.
1 Ahoana ny fanatsarana ny fifindran'ny tsinay
1.1 Ny voankazo
1.2 Haricot vert
1.4 Menaka oliva fanampiny
1.5 Voa ny fla sy chia hanatsarana ny fivezivezena tsinay
Ahoana ny fanatsarana ny fifindran'ny tsinay
Ankoatry ny sakafo, ny hydration dia mitana andraikitra lehibe amin'ity fampitahana ity. Ny rafi-pandevonan-kanina dia manana asa maro ary ny iray amin'izany dia ny fananganana seza hamafana ny fako amin'ny vatana. Rehefa mamorona ireo dia manala rano ny tsinaibe ary mihamafy. Rehefa tsy ampy tsara ny vatana, lasa mafy sy maina loatra ny seza ka lasa sarotra ny mandalo.
Ny tsy fahampian'ny hydration dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fitohanana, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fanarahana fahazarana tsara mba hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny fivarotana tsinay. Rehefa mitranga izany dia manjary mankarary ny fivalanana, mety hiseho ny hemorrhoids, ny fisitahana amin'ny anal, ary ny tsy mahazo aina amin'ny kibo mahazatra ny fitohanana. Ny fisotro rano 2 litatra isan'andro dia hanampy anao hanatsara ny fifindran'ny tsinay, ankoatry ny fampidirana ireo sakafo ireo amin'ny sakafo fihinanao.
Loharano voajanahary amin'ny fibre, vitamina ary mineraly, ny voankazo no sakafo tsy azo alaina amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Mba hanatsarana ny fifamoivoizana dia ny kiwi, plum, voasary ary paoma no tsara indrindra. Ny Kiwi manokana dia sakafo tena atolotra ho an'ireo olona mijaly amin'ny fitohanana. Ity voankazo ity dia manankarena amin'ny fibres mety levona ary ny prebiotika voajanahary kosa. Manaova kiwi 2 isa-maraina hisakafo maraina ary hanana fifamoivoizana mahazatra ianao.
Ny legioma sy legioma amin'ny ankapobeny dia tena ilaina amin'ny sakafo ara-pahasalamana, satria sakafo manankarena amin'ny fibre, vitamina ary mineraly izay tena ilaina amin'ny fiasa mety amin'ny vatan'olombelona. Fa raha misy legioma atolotra manokana hanatsarana ny fifamoivoizana dia tsaramaso maitso izy io. Ireo dia manankarena amin'ny fibre soluble, izay midika fa sakafo ho an'ny microbiota amin'ny tsinay.
Amin'ny ankapobeny, ny voa manontolo dia ilaina amin'ny fiasan'ny tsinay tsara, fa indrindra ny oats noho ny tombontsoa maro azo avy aminy. Anisan'ireny, ny oaka mihorona dia manankarena amin'ny fibres mety levona, izay midika fa toy ny prebiotic voajanahary izy io. Azonao atao ny mandray ny flakes oat amin'ny sakafo maraina, miaraka amin'ny yaourt na amin'ny menaka legioma tianao.
Fantatra manerantany amin'ny volamena misy ranoka, ny menaka oliva virjiny fanampiny dia iray amin'ireo sakafo hajaina indrindra. Ilaina ho an'ny rafi-pandevonan-kanina, satria mitazona ny bolus fecal ary manohana ny fandroahana azy amin'ny alàlan'ny nosy. Mazava ho azy fa tsy maintsy alaina ilay menaka mangatsiaka amin'ny salady na hampisy tsiro ny legioma, eo anelanelan'ny 4 sy 6 tablespoons ny menaka oliva virjina fanampiny mangatsiaka isan'andro dia ampy ho an'ny fifindran'ny tsinay.
Voa ny fla sy chia hanatsarana ny fivezivezena tsinay
Izy ireo dia raisina ho toy ny sakafo faran'izay tsara ho an'ny fananana mahasoa maro ho an'ny fahasalamana. Anisan'izany ny fananana fanatsarana ny fifindran'ny tsinay. Rehefa lena ny voa, mamoaka zavamaniry antsoina hoe mucilage. Ity akora ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny tsinay ary mampiroborobo ny tsinay.
Ankoatry ny fampidirana ireo sakafo ireo amin'ny sakafonao, ary koa sakafo hafa tena mahasalama sy ilaina toy ny ronono, proteinina, legioma, legioma na tavy, dia tokony ampidirina hetsika ara-batana kely isan'andro amin'ny fanazaran-tena ataonao. Ilaina ny fampihetseham-batana hampiroboroboana ny hetsika tsinay. Raha fintinina, ny hydration, ny sakafo ary ny fanatanjahan-tena no lakilen'ny fahasalamana tsinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » sakafo » Sakafo 5 hanatsarana ny fifindran'ny tsinay